व्यवस्थालाई भजाएर व्यथा बनाईदैछ - Pradesh Today व्यवस्थालाई भजाएर व्यथा बनाईदैछ - Pradesh Today
व्यवस्थालाई भजाएर व्यथा बनाईदैछ
व्यवस्था भनेको काल्पनिक शब्दकोष र काल्पनिक नाम रहेछ । यो कसैको देखेर सिक्ने टिप्ने वा स्थापना गर्ने रणनीति बनाउने मात्र रहेछ । व्यवस्था आफैमा साध्य रहेनछ । यो केवल मानवद्वारा स्थापित र कल्पित संरचना रहेछ । यो व्यवस्था सुखी, यो व्यवस्था दुःखी, यो व्यवस्था राम्रो, त्यो व्यवस्था नराम्रो, यो व्यवस्था जनताको,
त्यो व्यवस्था व्यक्तिको भन्ने अर्थ लगाउनु गोरूलाई गायत्री सुनाउनुजस्तै रहेछ । व्यवस्था जेसुकै पनि हुँदा र व्यवस्था जस्तोसुकै पनि हुँदा यदि व्यवस्थापन अति उत्कृष्ट हुने हो भने त्यो सार्थक बन्ने ध्रुव–सत्य नै रहेछ । अब कोही कसैले राम्रो भएन भनेर व्यवस्थालाई आरोप लगाउने र राम्रो भयो भनेर व्यवस्थालाई पूजा गर्ने बानी छाडौं ।
अब नितान्त नयाँ ढंगको सोंच विकसित हुन जरूरी छ । किनभने नेपालमा अनेकौं व्यवस्थामाथि व्याख्या विश्लेषण गरेर यो नभएको र त्यो नभएको भन्दछ भने उसले आफू मूर्ख भएर अरूलाई पनि मूर्ख गराउँदैछ भन्ने जान्नुपर्दछ र ठान्नु पर्दछ ।
यो कुराको प्रमाणित हाम्रो देशमा पटक–पटक भई नै रहेको छ । गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने, बोल्छु भन्नेले बोल्न नसक्ने, हिड्छु भन्नेले हिड्न नसक्ने, बनाउँछु भन्नेले बनाउन नसक्ने, दोष कसको ? व्यवस्थाको कि व्यवस्थापनको ? व्यवस्था जानेर ल्याए पनि,
नजानेर ल्याए पनि व्यवस्था बुझेर ल्याए पनि नबुझेर ल्याए पनि, व्यवस्था सिकेर ल्याए पनि, नसिकेर ल्याए पनि, व्यवस्था सक्कली भए पनि नक्कली भए पनि त्यो चल्ने र चलाउने कोबाट हो । व्यक्ति र शक्तिबाट हो कि होइएन ?
यदि व्यवस्था हाक्ने के छ र त्यो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति र शक्ति ठीक छ भने व्यवस्था–व्यवस्था नै हो । त्यो जस्तोसुकै हुँदा पनि राम्रै हुन्छ । हेर्नाेस् सिमेन्ट बोरामा हुन्छ, बालुवा नदीको किनारामा हुन्छ, ढुङ्गा बग्ने खोलामा हुन्छ, गिट्टी खहरे खोलामा हुन्छ, इट्टा आगोको भट्टामा हुन्छ,
यो सबैकुरा एकल गरेर असल कालीगढको हातबाट प्रयोग भयो भने त्यसबाट दरबार, महल, मठ–मन्दिर, पुल, बाटो–घाटो, मूर्ति, शालिक, जे पनि बन्दछ र बनाउन सकिन्छ ।
व्यवस्था भनेको नै यही हो । खोलाको बालुवालाई हातमा राखेर यो घर हो भन्यो भने त्यो के होला ? पागलपन होला कि नहोला ? त्यसैले व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सामञ्जस्यता कायम भएन भने जस्तो सुकै व्यवस्था भएपनि के गर्ने ?
अब नेपालमा व्यवस्थालाई लिएर टिका–टिप्णी गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन । यदि गर्ने व्यक्ति वा शक्ति साँच्चिकै व्यक्ति र शक्तिशाली हुने हो भने उसले हिजोकै पुरानो व्यवस्थालाई पनि लोकप्रिय बनाउन सक्दछ । यदि काम गर्ने र गराउने व्यक्ति र शक्ति साँच्चिकै व्यक्ति र शक्तिशाली नहुने हो भने संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित गराए पनि केही लछाटपाटो लाग्ने वाला छैन ।
संसार कै उत्कृष्ट व्यवस्था र संसारकै उत्कृष्ट संविधानमा खेलेको हुर्केको र बदलेको सरकारले आम देशबासीलाई दिने छनक र रौनक के हो ? सम्पूर्ण देशभक्त तथा न्यायप्रेमी जनता प्रतिक्षाको घडीमा पंक्तिमा उभिएर आजको सरकारको काम–कार्यलाई तिव्र ढंगले मूल्यांकन गर्दैछन् ।
यो मूल्यांकनमा आजको सरकार कुन कित्तामा पर्न सफल हुने हो । उसले आफूलाई निकै अब्बल र सक्षम ठाने पनि देशभक्तिको आँखाको नेपाल आमाको काखमा त्यो न्याय संगत र तर्कसंगत हुन्छ कि हँदैन ?
आजसम्म जे भए नि ती सबै जनता ठग्न र ढाँट्नका लागि भए किन भने तमासाले देखाई सक्यो । यहाँ धेरै हुर्नुपर्ने, कुनै पनि र पर्खनुपर्ने अवस्था नै छैन । कुनै पनि व्यवस्थालाई दोष दिनुपर्ने र गाली गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन । जान्ने र ठान्ने व्यवस्थापनको जिम्मा लिने व्यक्ति र शक्तिले हो अस्ती यो देशमा के–के भयो, हिजो यो देशमा के–के हुँदै थियो र आज यो देशमा के–के हुँदैछ ?
यो सबै जोख्ने, तौल्ने, नाप्ने, भन्ने, दाँज्ने, मापन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने, तराजु भनेको व्यक्ति र शक्तिको तराजु हो । अब हामीलाई मानव चरित्र नाप्ने फित्ता चाहिएको छ । अब हामीलाई मानव इमान्दारिता भर्ने मानो चाहिएको छ । अब हामीलाई मानव संवेदनशीलता चलाउने पाथी चाहिएको छ । अब हामीलाई मानव सिद्धान्त आदर्श जोख्ने तराजु चाहिएको छ ।
अब हामीलाई मानवअधिकार मापन गर्ने सूचांक चाहिएको छ । अब हामीलाई मानव सेवा देख्ने र हेर्ने मूल्यांकन द्रष्टा चाहिएको छ । अब हामीलाई मानव देशभक्त र राष्ट्रभक्तमा लगाउन सक्ने कुशल मार्गदर्शक चाहिएको छ ।
हामी सबै फेरेको नाटक त गछौं तर हामीले आजसम्म व्यक्ति र प्रवृत्ति फेरिएको बाचा–कसम खान सक्छौं । हिजोदेखि आजसम्म व्यक्ति पनि उही र प्रवृत्ति पनि उही ।
अनि बदलिन्छ कसरी ? बदल्छ कसले ? एउटा निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, योजना, सिद्धान्त, आदर्श, अभिष्ट, अभिलाषा नहुँदासम्म कसरी व्यवस्था लोकप्रिय बन्छ ? व्यवस्था कसले ल्याए ? जनताले व्यवस्था कसका लागि ल्याए ? जनताका लागि व्यवस्था किन ल्याए ?
जनता सुखी र समृद्धि बन्नको लागि भयो त ? या कसैबाट कतैबाट नभइरहदा जनताले ल्याएको व्यवस्था भनेर जनताको टाउको माथि व्यवस्था बोकाईदिने र आफूहरूले व्यवस्थाको फल चुसिरहेन ? यस्तो पनि हुन्छ ? निश्चित गर्ने कि नगर्ने ? जनताको लागि भयो–भयो के भयो ?
बुँदागत रूपमा भनौं त । व्यवस्थाको भारी बोक्ने जनता र व्यवस्थाको भारी बोकाउने नेताको बीचमा एकपटक दाँज्ने प्रयास गरौं त जो भारी बोकेको छ ऊ भोकले सुक्दैछ जो भारी बोकाउँदै छ ऊ रस र फलले फुल्दै छ र पाक्दैछ । यही हो समाजवाद भनेको । यसलाई जनताको समाजवाद भनिन्छ ? यो कुनै देशको आयातित समाजवाद हो ? समाजवादको परिभाषा जान्ने र जनाउने कसले ?
राजनीति गर्न सिकाएको जनताले हो । सिकेको नेताले होइन । यो कुरा हेक्का रहोस् कि यदि यो व्यवस्था जनताले ल्याएको हो भने आज पछिल्लो समयको राजनीति विवाद, बहस, असहमति, खिचातानी र संकटको घडी कसका लागि केन्द्रित हो ?
सरकार बनेकै छ संविधान लेखिएकै छ । अब विकास र समृद्धिमा लाग्न कसले लात हान्यो ? विकास समृद्धिमा कसले खुट्टा तान्यो ? समाजवाद स्थापना गर्न कसले हात बाँधिदियो ? देश र जनता भन्ने कसले मुख थुनिदियो ? देशभक्त बन्नलाई कसले घोक्रे ठ्याक लगायो ?
लोकप्रिय बन्नलाई कसले थुनेर राख्यो ? सदाचार बन्नलाई कसले स्वार्थीको पुराण सुनायो ? काम गर्छु भन्नेलाई कसले बन्देज लगायो ? बहुमतीय प्रणालीलाई कसले अल्पमतमा झार्ने पर्यन्त ग¥यो ? कम्युनिष्टको सरकारलाई कन्फ्यूजनको सरकार कसले बनायो ?
आजको सरकार कम्युनिष्टको हो जस्तो र छ जस्तो लाग्छ ? यदि लाग्छ भने लोग्ने जति सबै भ्रम आशंका र द्विविधामा छन् । यो कम्युनिष्ट सरकार भए पनि कसैले यहाँ कन्फ्यूजन सिर्जना गरिदिएको छ । यो कन्फ्यूजनको अवस्थाबाट कसरी सरकारले पार पाउँछ ?
नेपालमा जस्तोसुकै व्यवस्था आएपनि, ल्याएपनि र भित्रिएपनि सरकारमा बस्ने पात्र र प्रवृत्तिको अवस्था सधैं उस्तै बानरको जस्तै अनुहार हुने, यो के को सराप हो ? कमसे कम अनुहार त बदलिनुपर्दछ नि ? जस्ताको तस्तै हुबहुँ, उस्ताको उस्तै, सबै बदलेर पनि पात्र र प्रवृत्ति बदल्न नसक्ने कस्तो रोग हो ? कस्तो संक्रमण हो ? कस्तो भाइरस हो ?
वर्तमान अवस्थामा विश्वलाई गाँजेको, विश्वलाई संक्रमित बनाएको र विश्वलाई आतंकित बनाएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाको भाइरस एकपटक मुलुकभरबाट नै हटेर जानेमा सारा जनमान ढुक्क छन् । आश्वशीत छन् र विश्वशीत पनि छन् तर नेपालको राजनीतिमा लागेको प्रतिगामीको भाइरस कहिले अत्य होला र राजनीति हिसाबले नेपाल देश र नेपाली जनतालाई फुल्न नदिने र फुल्न नदिने रोग निको कहिले होला ?
नेपाली नागरिक भन्न सक्दैनन् र जान्न सक्दैनन् । किन भने यो बडो अचम्मको रोग छ । जस्तोसुकै व्यक्ति आएपनि असफल हुने । जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याएपनि असफल हुने । जस्तोसुकै संविधान ! संविधान !! भनेर रोयो त्यो संविधान पनि आयो ।
कुनै बेला व्यवस्था ! व्यवस्था !! व्यवस्था !!! भनेर पनि रोयो त्यो पनि ओयो । कुनै बेला पार्टी ! पार्टी !! पार्टी !!! पार्टी !!!! भनेर रोयो, त्यो पनि आयो । कुनै बेला व्यक्ति ! व्यक्ति !! व्यक्ति !!! भनेर रोयो त्यो पनि आयो । आज त सबथोक छ त, त्यही पनि किन यस्तो ? ए ! अब त लाज मान्नेबेला भएन र ? स्वदेशको त लाज लागेन लागेन, विदेशको त लाज मान्ने कि ?
देशमा कस्को सरकार छ ? देशमा कस्तो सरकार छ ? देशमा किन सरकार छ ? देशमा कस–कसका लागि सरकार छ ? देशमा कहिलेसम्मका लागि सरकार छ ? देशमा के गर्नका लागि सरकार छ ? देशमा के बनाउनका लागि सरकार छ ?
देशमा के बदल्नको लागि सरकार छ ? यो देशको व्यवस्थाले आजसम्म बदलेको भनेको शब्द भण्डार मात्र हो । यसले जे बदल्यो त्यो हो शब्द÷शब्द बदलेर यदि देश बदलिन्छ भन्ने साँच्चै हो भने यो देशमा साम्यवाद स्थापित गर्ने कम्युनिष्ट सरकार छ, त्यसैलाई हेरे मात्र पनि पुग्छ ।
नत्र भने यसका लागि अब केही गर्न जागरूक हुने कि नहुने ? गर्ने ! गर्ने !! गर्ने !!! सरकार केही नगरी बसेको त छैन नी ? उसले दिनहुँ निहुँ खोजेको छ, कलह गरेको छ, झगडा गरेको छ, विवाद सिर्जना गरेको छ, छलफल गरेको छ, बहस चलाएको छ, असहमति गरेको छ,
शक्ति प्रदर्शन गरेको छ, घुर्की लगाएको छ, धम्की दिएको छ, पार्टी तोडफोड कुरा अघि सारेको छ, सरकार बदल्ने नीति ल्याएको छ, कसले कसलाई सहयोग गर्ने ? सहमति बनाएको छ ? कसले कसलाई असहयोग गर्ने हस्ताक्षर जुराएको छ,
प्रत्येक दिन बिहानदेखि मध्यरातसम्म कोही पनि नेता फुर्सदमा हुँदैनन् । काम गरको ग¥यै छन् तर काम कसका खातीर केन्द्रित छ ? यो जान्न र बुझन स्वयम् नेताका लागि अपरिहार्य छ । जनताले चाहेको जनताले रूचाएको जनताले इच्छाएको, जनताले छानेको, जनताले मानेको, जनताले ठानेको सरकार आज कसका लागि यसरी घिनीघोस गरी काम गर्दैछ । देशका सारा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालले सरकारको दिन चर्यालाई देखाईरहेको छन्,
भनिरहेका छन् । बोली रहेका छन् । र सुनाईरहेका छन् । काम कसका लागि हुँदैछ ? शीर्ष नेताहरूका बीचमा निकै दोहोरी चलेको छ, त्यो दोहोरीले जनतालाई दिने फल र नतिजा के हो ? व्यक्ति, शक्ति, समूह, संगठन, पार्टी, मोर्चा तथा दलको बीचमा सक्रिय प्रणाली कि चक्रिय प्रमाणी ? भन्ने विषमा गम्भीर र संघन छलफल हुँदैछ ।
यसले देश र जनतालाई दिने प्रतिफल के हो ? अब समय औंला गन्दैमा व्यक्ति त हुनेवाला छ । पाँच वर्ष अवधिमा यो पूर्णबहुमतको सरकारले देशमा कस्तो छाप हान्ने हो र कस्तो लोगो प्रदान गर्ने हो ?
यो मूल्यांकनमा आजको सरकार कुन कित्तामा पर्न सफल हुने हो । उसले आफूलाई निकै अब्बल र सक्षम ठाने पनि देशभक्तिको आँखाको नेपाल आमाको काखमा त्यो न्याय संगत र तर्कसंगत हुन्छ कि हुँदैन ? हेर्न बाँकी छ, सुन्न बाँकी छ, देख्न बाँकी छ र छेकेर छेकिन्न ।
समयमा जे गर्ने हो त्यो गरिएन भने भोलि पाउने पनि शुन्य नै हुनेछ । यदि असारको १५ मा धान खेतमा धान रोपिएन भने भोलि मंसिरमा धान काट्न पाइन्छ र धान काट्न फरक प¥यो र पाइएन भने भात खाने पनि पाइन्छ । भात खान पाइएन भने भोको पेटको अवस्था नाजुक र दर्दनाक हुनेछ । त्यसैले सरकारका लागि पनि आज भोलिको समय असार १५ हो ।
यो असार १५ मा देश र जनताका लागि धान रोप्नुपर्ने बेलामा नेता–नेताबीच भाले जुधाई र दोहोरी गाएर जित्ने र हार्ने पात्र घोषित गर्न थाल्यो भने भोलिको समय सरकारका लागि व्यवस्था र पार्टीका दुबैका हिसावले तनावपूर्ण हुनेछ ।
दाङमा विपी काँग्रेस स्थापना
विकासको आधार शिक्षा
गुणस्तरीय सेवा कामय राख्न सुझाव